Ukuqeqesha Versus Ibhasi Aseyurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Ukuqeqesha Versus Ibhasi Aseyurophu
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 31/03/2021)
Kwisithuba seeyure nje ezimbalwa, uyakwazi ukuba ukuhlola inkitha kumazwe amatsha eziqaqambileyo amenyezelayo. kodwa, yeyiphi eyona ndlela ifanelekileyo. Ukuqeqesha xa kuthelekiswa Bus ngo Europe xa uhamba?
Ngokukhawuleza kwaye kungcono ujonge!
Uqeqesha, ngokungafani ibhasi, zihambe ngqo nge emaphandleni. Oku kuthetha ukuba endaweni Nijonge omkhulu isicefe, okanye bachithe nje ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye, nawe unalo ithuba ukubona ngakumbi lizwe ozikhethileyo. Xa sele ukulungele ukuya kuma kwindawo yakho elandelayo, uya kufumana khona akukho xesha. Isantya esiphezulu Ukuqeqesha xa kuthelekiswa Bus eYurophu. It is a no-brainer.
Ngu 'akukho kwemikrozo', ke musa akuthethi 'akukho ibetha sweet'. Sithetha akukho Ukubambeka kwetrafikhi. Leyo yeyona nto malunga kwimizila kaloliwe - akukho nto uvimba indlela. Basimisela ilungelo kumgca othe ngqo ukuya oya kuyo.
izihlalo Bus ke luthe ngaphezu izitulo uloliwe
Zava Train ephikisana Bus
Xa kufikwa ekuhambeni ngololiwe xa kuthelekiswa nebhasi. Comfort uyinkosi. Xa isigqibo phakathi Uloliwe xa kuthelekiswa Bus eYurophu, Oololiwe win nje kuphela en kwindlela kodwa-phakathi, kakhulu! Kwizikhululo zikaloliwe, Unga ulinde uloliwe wakho intuthuzelo ukuphepha, nezinto ezininzi iindawo ukuze uhlale phantsi, nidle nisele okanye uthenga izinto for uhambo lwakho.
On a Bus, wena wabelane isithuba ezincinane (nendlu yangasese encinane!) nge nabanye. Akuyi kuba nako ukufumana phezulu Yolule imilenze yakho okanye bafudukele inqwelo ukuzola, yaye ukuze kungabikho nakuphi na ukutya okanye isiselo ekhoyo.
Ukuqeqesha izihlalo awunangxaki ngaphezu izitulo ibhasi
Kwi uhambo Qeqesha, izaziso ziya kunika eneenkcukacha phezulu-ukuya-umhla ulwazi uloliwe lwakho, evela xa eshiya apho ime apho eqongeni ngayo isuka, kwaye ukuba ufuna uthelekise uloliwe xa kuthelekiswa ibhasi kwi bhetyebhetye, ngoko kuloliwe, obaziyo 90% ukuchana xa uya kufika.
Ibhasi iza kukunceda ukususela A ku B, kodwa ukuba ufuna ukuya phambili, uya ezisebenza iingxaki ezibizayo. ukulibaziseka ongeke ezibangelwa kwindlela iindlela kungathetha ulahlekile uqhagamshelo lwakho, indleko ngakumbi.
On a Train, you have total flexibility; zingaphendula nje ukutsibela nayiphina esiqeqesha ukuba ivumelane izicwangciso zakho.
Akukhathaliseki ukuba uphose uloliwe yakho - ungakwazi eku nje phezu elinye elilandelayo!
Ngaba uyaqiniseka ukuba Ukuqeqesha xa kuthelekiswa Bus eYurophu mpikiswano kodwa?
Qhubeleka, ncwadi uhambo lwakho ngololiwe Gcina A Isitimela. Inendawo engaphezulu kuloliwe, uya kuba igumbi ukuba ahlale emva, relax kwaye ukuba bonwabele scenery xa uceba wakho olandelayo yiya.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-versus-bus%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#bustravel Bus europetravel longtrainjourneys Isikhululo sikaloliwe tips uloliwe train Travel TrainVSBus traveltips